Ruvara & Dye - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
WHD Series vakanaka Bead Mill
WSD Series Fast Kuyerera Sand Mill
WSJ Series Horizontal Inter-kutonhora Full Rinoshanda Bead Mill
WSK Series High-viscosity vakanaka-chinja Bead Mill
WSP Series Fast Kuyerera Nano Bead Mill
WSS akatevedzana Horizontal Sand Mill
PGK Series Turbo Nano Sand Mill
WSV Series Vertical Inter-kutonhora Bipyramid Bead Mill
WSZ Series Inter-kutonhora mukuru-viscosity Horizontal Bead Mill
Ba / JRS Series Three Roller Mill
Vakanaka Nomazvo Three Roller Mill
YS / YSS Series Hydraulic Three Roller Mill
YSP / YSH Series Hydraulic Three Roller Mill
High Viscosity chisanganiso
Ls / GJD Series Basket vachikuya Mill / Emulsifier
LXDLH Series Planetary Power chisanganiso
LXQLF Series Enhanced Multi-basa Triple mugodhi chisanganiso
LXQLF Series Multi-basa Triple mugodhi chisanganiso
LXXJB Series Planetary chisanganiso
Low Viscosity chisanganiso
DSJ / SZJ Butterfly chisanganiso
GFJ Series High-nokukurumidza vakapararira Machine
Energy Saving Vacuum hovhoni
Nano zvinhu nyoro nokugeda chigadzirwa mutsetse
Chocolate, nzungu, walnuts, Camellia mbeu, Guar chingamu chigadzirwa mutsetse
bemhapemha / chemishonga tupukanana / herbicide chigadzirwa mutsetse
Electronic slurry chigadzirwa mutsetse
Gravure ingi otomatiki chigadzirwa mutsetse
High kunyatsoshanda Ink chigadzirwa mutsetse
High Viscosity Inks (Kushaya, UV zvaizopedza, Silk yokudhinda) chigadzirwa mutsetse
Food & Health chigadzirwa
Ruvara & Dye
Ruvara ari weupfu fuma inoshandiswa coloring. Hazvina insoluble nemvura, girisi, nebwe, makemikari solvent, nezvimwewo, asi zvinogona noruvara vakapararira vezvenhau izvi kuti payo coloring uye ane mumwe akafukidza simba. Ruvara chinhu chinokosha mbishi zvinhu pakuita pendi, ingi, mafuta kupenda namatidza, kuita-up mafuta kupenda, ruvara pepa zvichingodaro. Kunze, pigments vari kushandiswa zvekupfakira uye coloring mapurasitiki, rabha zvinhu uye chakaita zvokugadzirwa faibha mbishi zvinwiwa.
Dhayi chinhu makemikari remubatanidzwa inoita zvimwe zvinhu mavara zvakajeka, zvakasimba uye inonziwo dhayi chakaita zvokugadzirwa nokuti vakawanda vavo vari kushandisa ikozvino muri chakaita zvokugadzirwa. Dhayi inogona kukamurwa mvura kutakurwa pulp, solvent anoregereiko pulp, mvura akatakurwa ruvara wevasungwa, solvent anoregereiko ruvara wevasungwa maererano chinzvimbo. Maererano chikumbiro, rinogona rakakamurwa zvedongo dhayi, unhani dhayi, Whitehead Textile dhayi uye dhayi epurasitiki.
Vanokurudzira zvokushandisa ruvara & dhayi: ES / DS vakanaka chaiwo matatu chinotenderera thousand L, DYS dzino hydraulic matatu chinotenderera paguyo, YS / YSS akatevedzana hydraulic matatu chinotenderera paguyo, ba / JRS akatevedzana matatu chinotenderera paguyo, WSP Series Fast Kuyerera Bead Mill, PGK dzinoti Turbo Nano jecha chigayo,